छातीको एक्सरे गर्न आएकी युवतीलाई डाक्टरले अरु नै गरेपछि …. « Deshko News
छातीको एक्सरे गर्न आएकी युवतीलाई डाक्टरले अरु नै गरेपछि ….
परासी, २८ फागुन । छातीको एक्सरे गर्न आएकी युवतीलाई कोठामा लगेर ‘अर्थोकै’ गरेको आरोपमा एक स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेका छन् ।
पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ लोहरौलीमा एक्सरे प्याथोलोजी क्लिनिकका सञ्चालक २४ वर्षीय अमृश यादवले १५ वर्षीया किशोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सोमबार राति पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन् । दुर्व्यवहार आरोपमा पक्राउ परेका यादव रामग्राम नगरपालिका–९ का हुन् । केही समयदेखि यादवले लोहरौलीमा क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।